Ogaden News Agency (ONA) – DIGNIIN! (Sir culus) Taliska Woyaanaha oo maleegaya Dacaayado cusub oo iska horkeenaya Qowmiyadaha dagaalka kula jira! By: Xaaji M/rashiid
DIGNIIN! (Sir culus) Taliska Woyaanaha oo maleegaya Dacaayado cusub oo iska horkeenaya Qowmiyadaha dagaalka kula jira! By: Xaaji M/rashiid
Posted by Daljir	/ June 26, 2017
Qoomiyada laga tirada badanyahay ee Tigreega ee dega waqooyiga itoobiya, balse wata magaca dawladnimada ayuu caalamaku ka dharagsanyahay dhibaatada baaxadda leh ee uu ugeystay shucuubta aan hubeysanayn ee diiday maamulkiisa gurracan. Taliska dhiigyacabka ah ee Woyaanaha oo ku caanbaxay ballan burinta iyo khiyaanada waxaa ugu horreeyay cid runta u sheegtay shacabka ree ogaadenya ee aragtida dheer leh. Taasna waxay ku mutaysteen dil wadareed, xidhay wadareed iyo kufsi dumareed joogta ah, hase yeeshee midaasi kama hor istaagin inay u dagaalamaan xorriyadooda ay xaqa uleeyihiin!
Jabhadda Wadaniga Xoreynta ogaadenya ee JWXO iyo Shacabka oo isku duuban ayaa ku qasbay woyaanaha inay u soo fadhiistaan wadahadal caaalami ah kaasoo kadhacay wadanka Kenya marar kala duwan Sanadihii lasoo dhaafay. Dadka qaar ayaa aaminsan in woyaanuhu ujeeddo gaar ah kalahaa kulankaas oy iyagu soo dalbadeen, balse ay ku hongoobeen kana waayeen hadafkoodii. Shucuubta kale ee ku hoos jirta waxa loogu yeedho itoobiya ayaa ku kadsoomay oo run uqaatay doorasho kusheegta ay woyaanuhu qabtaan shantii sanaba mar, taas oy ugu dambaysay tii 2015tii. Waxaa caadi iska ah in dhiig badani kudaato waqtiga doorasho kusheegta ama dad badani ay la kulmaan xidhay baahsan iyo cabudhis!
Ururada mucaaradka ah ayaa markay soo taabteen salkii TPLF waxay qaateen wixii intaa ka dambeeyay Qoriga AK47 iyagoo wacad ku maray inay dagaal adag lagalayaan Maamulka Woyaanaha. Waxaa la aaminsanyahay in Jabhadda ONLF ay gargaar siyaasadeed u fidisay guud ahaan mucaaradka itoobya oo ay lasoo daristay argagax siyaasadeed oo ku habsaday. Horumarka la taaban karo ee Ururadu sameeyeen Waxaa kamid ah Gaashaan,buurta loo bixiyay PAFD oo ka kooban shan qowmiyadood oo xornimodoon ah. Kooxo kale oo ay horkacayaan P Ginbot7 oo ah Qowmiyada axmaarada oo markii hore wax kale is tusay ayaa dib ka fahmay inay lagama maarmaan tahay inay Garab u helaan halgankooda. Sidaa waxaa ku yimid heshiiska aad maqasheen ee waaga dhaweyd kadhacay magaalada Frankfurt ee wadanka Germany.
Hadaan hoos ugu dego nuxurka warkeyga, waxaa ka dhashay heshiiskaas Probagaando ama Dacaayad riqiis ah oo ay woyaanuhu doonayaan inay ku fashiliyaan heshiiskaas dhexmaray ONLF & P Ginbot7, waa sida aan ku helay war lagu kalsoonyahay. Isha aan warkan ka helay waxay intaa ku daraysaa in woyaanuhu ku dhaleecaynayo P Ginbot7 inay heshiis la galeen Urur doonaya inay itoobiya ka go’aan. Waxay sirta aan helay tibaaxeysaa in woyaanuhu arinkaas u qorsheeyay Aduun gaadhaya 5 malyuun oo Birr iyo saxaafado ay kamid yihiin kuwa la iska arko. Xogtu waxaa kale oy intaa kusii dareysaa in Woyaanuhu aad uga khalkhaleen heshiiskii dhexmaray ONLF iyo P Ginbot7 una arkeen mid soo dadajin kara burburka Taliskooda!
Halgamayaal waxaan far waawayn idiinku qoray erayga Digniin ee ciwaanka saaran, waana muhiim inaa idiin qeexo waxa uu xambaarsanyahay. Sidaad la socotaan Taliska sii dumaya ee woyaanaha Siraha hordhaca ah ee laga helayo waxay sheegayaan, inay doonayaan isku horkeenka qowmiyadda Axmaarada iyo Soomaalida ogadenya si ay u fashiliyaan. Waxaa jirta inuu nidaamka gumaysiga ku talo jiro inuu fuliyo falal dhagareed oo leh ujeedo ah in dadka Amxaarada iyo Soomalida la isku diro oo colaad laga dhex abuuro.
Waxaa cadeynaya inay arintaasi ka suurto gasho Askarta woyaanaha waakay horay isugu direen Oromada iyo Soomaalida oo ah dad daris ah oo wada dulman. Waakaad ogeydeen inuu dhiig badani ku daatay arintaas, taasina waa ilbaxnimada woyaanuhu aaminsanyahay inay talada kusii haysan karaan! Sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa inay umada soomaalida Ogaadenya ee halganka dheer kusoo jirtay ayna marna Qorigooda iyo Siyaasadooda ku jeedinin la dagaalanka qowmiyadaha kale. Xikmadaha soomaalida waxaa kamid ah- KHEYR WAX KUMA YEELO EE SHAR U TOOGHAY( ka digtoonow).
Halgamayaal waxaan si aad ah u saadaalinayaa inay dhici karto inay halganka Ogaadenya isagana u adeegsadaan Dacaayado cusub oo noqon kara- Waxay soo celinayaan Axmaaro iyo Dhargigii oo heshiis bay la galeen. Haday taasi dhacdo waxay noqoneysaa inay iyagu isu arkaan Dad wanaagsan, sidaana ay bulshada qaarkeed ku duufsadaan! Si kastaba ha ahaatee waxaa la ogyahay in JWXO iyo Taageerayaashooda gudaha iyo dibaduba ay soo fashilin jireen Tabaha ay soo maleegaan Woyaanuhu, waana ku kalsoonahay inay ka hortagi doonaan Progaandaha cusub ee daba,socda sida la sheegay Heshiiskii Labada Urur ee kala hogaaminaya Reer Ogaadenya iyo Axmaaro!
Waxaan kusoo xidhayaa qoraalkan Digniinta xambaarsan, Halku,dhiyada halganku caanka kuyahay oo ah- Mintid, Midnimo, Isku tashi, Guul iyo Allaahu Akbar!